Sacuudiga oo baaraya ilmo internetka la soo galiyay oo nin uu dilayo ilmo xaas hore ay dhashay - BBC Somali
Sacuudiga oo baaraya ilmo internetka la soo galiyay oo nin uu dilayo ilmo xaas hore ay dhashay
Image caption Baraha bulshada ayaa Sacuudiga ku kordhay sanadihii ugu danbeeyay
Xukuumadda Sacuudiga ayaa bilwoday baaritaan ka dib markii lagu wargaliyey filim la soo dhigay baraha Intetnet-ka kaas oo muujinaya Nin garaacaya ilmo ay isku dhaleen xaas ay horey isu qabi jireen.
Haweenay Suuriyaan ayaa muuqaalka ku baahisay barta Internet-ka ee Twitter-ka, iyadoo sheegtay in filimka uu u soo diray ninka oo ay horey isu qabeen isagoo ku qasbaya inay dib ugu soo laabato.
Cabashada hooyada ka timid ayaa keentay in muuqaalka la wadaago in ka badan 118 kun oo goor muddo 24 saac ah. Saraakiisha ayaa sheegay in ilmaha oo sadex sano jir ah hadda la geeyey xarumaha xanaanadda.
Hooyada ayaa heshay 14 kun oo qof oo saaxiibo kula ah Twitter-ka waxaana la sameeyey qanaad ama hashtag# ciwaan looga dhigay hooyo doonaya inay gabadheeda dib loogu soo gacan galiyo.Muuqaalka ayaa muujinaya ninka oo garaacaya ilmaha oo neeftu ku dhagayso.
Waxaa kale oo lagu arkayaa muuqaalka isagoo dharbaaxaynaya ilmaha yar oo ooynayai isla markaana madaxa si arxan daran ugaruxayya, waxaa kale oo muuqaalka laga arkayaa isagoo sigaar wajiga uga daminaya ilmaha yar oo jiifa.
Wasaaradda shaqada iyo horumarinta bulshada & xuquuqda aadanaha ee Sacuudiga ayaa u sheegtay hooyada ilmaha inay xaaladda la soconayaan.
Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in ilmaha hadda la geeyey xarun badbaado oo ku taal magaalada Maka, isla markaana lagu sameynayo baaritaan caafimaad iyadoo la qaadi doono "talaabooyinka loo baahan yahay ee la xiriira bad-qabka ilmaha".
Hooyada ayaa u mahadcelisay masuuliyiinta dadaalkooda laakiin kuma aanay cadayn Twitter-ka in gabadheeda dib loogu soo celiyey iyo in kale.
Goor sii horeysay waxay beenisay wararka sheegay in gabadheeda dib loogu soo celiyey.
Hooyada oo wareysi siisay Telefishinka Sacuudiga laga leeyahay ee Al-Arabiya, waxay sheegtay in ninkeedu uu ahaa naxariis laawe oo garaaci jiray afartii sano ee ay isqabeen, isla markaana ay ka soo baxsatay iyadoo hadda la nool qoyskeeda oo degan magaaladda Maka ayna qaadatay furiin.
Qoyskeeda ayaa sheegay inay kula taliyeen inay gabadheeda ay u dayso Aabaha ayna aado nidaam maxkamadeed. Waxay sheegtay in ninku uu soo diray muuqaalka ilmaha uu gaboodfalka ugu sameynaynayo si uu ugu qasbo "inay u soo laabato ama uu dilo ilmaha".